MIAKATRA NY TAREHIMARIKA ETO ANALAMANGA: 439 ireo tranga voamarina afak’omaly, manaramaso eny ifotony ny avy amin’ny Minisitera – Free News
lundi, 18 octobre 2021 - 9:07
Ny antontanisa nivoaka omaly.
Accueil/Songadim-baovao/MIAKATRA NY TAREHIMARIKA ETO ANALAMANGA: 439 ireo tranga voamarina afak’omaly, manaramaso eny ifotony ny avy amin’ny Minisitera
MIAKATRA NY TAREHIMARIKA ETO ANALAMANGA: 439 ireo tranga voamarina afak’omaly, manaramaso eny ifotony ny avy amin’ny Minisitera
Ivon’ny valanaretina tanteraka ny Faritra Analamanga ankehitriny, raha ny tarehimarika nivoaka omaly no asian-teny. Tamin’ireo tranga vaovao niisa 559 mantsy dia fantatra fa teto Analamanga avokoa ny 439 tamin’izany. Fepetra noraisin’ny Minisiteran’ny Fahasalamana, noho izany, ny fanetsehana ireo tale sy tomponandraikitra isan-tsokajiny amin’ny fidinana ifotony sy ny fanarahamaso ireo toerana mandray an-tanana ny mararin’ny Covid-19, ny resaka fanafody, ary ny fanamafisana ny fanentanana.
Lucien R. 10 avril 2021
Ny tatitry ny antontanisa omaly dia naneho ny fisiana olona miisa 559 voaporofo fa mitondra ny covid-19, tamin’ny fitiliana 1 730 natao, ka ny 439 tamin’ireo dia voamarina fa avy eto amin’ny Faritra Analamanga avokoa. Hita sy tsapa araka ity antontanisa ity tokoa fa efa tena miparitaka eto afovoan-tany ny covid-19. Araka ny fanazavana tokoa mantsy dia ity antontanisa ity no isan’ireo ambony indrindra hatramin’izay nidirana tamin’ny andiany faharoa amin’ny fiatrehana ny covid-19 izay. Tsy niandry ela fa avy hatrany dia nomena baiko hentitra ireo Tomponandraikitra isan-tsokajiny eo anivon’ny Minisiteran’ny Fahasalam-bahoaka sy ireo “Médecin inspecteurs” miisa valo teto amin’ny Faritra Analamanga ny Minisitra tomponandraikitra, izay nalefa nidina ifotony nijery ny zava-misy marina teny anivon’ireo tobim-pahasalamana mandray an-tanana ny valanaretina. Nanambara ny minisitry ny Fahasalam-bahoaka, ny Profesora Rakotovao Hanitrala Jean Louis, fa miha mahazo vahana eto Analamanga ny “variant sud africain” izay manana hery 50% avo heny noho ilay Coronavirus teo aloha ary mifindra haingana be mitsy. Tamin’izany no nilazany fa mila mitandrina ny rehetra ary tokony hanaraka amin’ny antsakany sy andavany ireo fepetra sakana rehetra napetraka indrindra fa ny fanaovana ny arotava.
Voafetra ny fivezivezena amin’ny CTC-19 sy Hopitaly
Nanao antso avo tamin’ireo tomponandraikitra eny anivon’ireo toeram-pitsaboana CTC-19 sy CSB ary Hopitaly mandray an-tanana ity valanaretina ity ihany koa ny tenany ny tokony hanenjanana ireo fepetra eny an-toerana, indrindra fa ny fifamezivezena eo amin’ireo marary sy ny fianakaviany. Fotoana izay niantsoany ny rehetra manana havana marary mba hanaiky ny fandaminana. Nampahatsiahy ihany koa ny Minisitra fa maimampoana avokoa ny fitsaboana sy ny fanafody entina hitsaboana ity valanaretina ity.
Handray tambin-karama manokana
Nankahery ireo mpiasan’ny fahasalamana miantsehatra eny ifotony sy mifampitakosona amin’ny marary ihany koa izy, ary nampanantena fa tsy maintsy hisitraka ny tambin-karama manokana izy ireo, izay nanairany ireo tomponandraikitra ny tokony handefasana ny lisitr’ireo mpiasa, any amin’ny Minisitera foibe.
Nandritra ny fampitana mivantana ny tarehimarika mahakasiaka ny fivoaran’ity valanaretina ity ihany koa no nahafantarana fa mahatratra 3 251 ireo marary mbola manaraka fitsaboana ary nisy kosa anefa olona miisa 201 izay fantatra fa sitrana soa aman-tsara. Miisa 288 amin’ireo marary ireo dia nambara fa mampiseho ilay tranga misy fahasarotana avokoa, araka ny tatitra hatrany. Olona miisa 11 kosa no fantatra fa lavon’ity valanaretina ity. Mila mailo ny rehetra, noho izany.
Sata (mpianatra asa)
ADY AMIN’NY COVID-19 : Nohenjanina ny fepetra ao Mahajanga, noferana ny fahafaha-mivezivezy
FAMPIASANA NY VAKSINY COVID-19 SY NY FEPETRA HORAISINA: Maka ny hevitry ny Akademian’ny mpitsabo ny Fanjakana